AmaTywina oMdibaniso kunye neembasa zabaMdibaniselwano kunye nee-LLC
Itywina lethu elihle leCustom Corporate / Embosser libandakanyiwe kwiikhithi zethu zeCorporate kunye ne-LLC. Yenziwe ngentsimbi kodwa ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, amatywina adibeneyo njengawethu anokufuneka kumazwe amaninzi kwintengiselwano ethile.
Uku-odola iTywina leQumrhu, nceda tsalela isebe lethu lenkonzo yabathengi ngeMon-Fri phakathi kwe-6: 00 AM kunye ne-5: 00 PM Ixesha lePacific apha:
661-253-3303 kwihlabathi liphela
Okanye ungasebenzisa ukungeniswa kwefom yoku-odola apha: Oda iTywina loShishino
Itywina eliMiselweyo leNkampani- $ 56
Le modeli iye yathandwa ngenxa yobungakanani bayo bokubumbana kunye nokuphakama okuphezulu okubonelela ngokuqinileyo, ukubonakala okuqinisekileyo phantse nasiphi na isitokhwe sephepha.
Itywina leDesktop ehlanganisiweyo- $ 96
Le modeli yenzelwe ukubeka uxinzelelo olukhulu ngomzamo omncinci. Kuyacetyiswa kakhulu ukubonakala kwamaxwebhu rhoqo kunye nevolumu ephezulu.
Utywina lweeNkampani eziNzima- ama-72 eedola
Olu tyikityo lobungakanani obukhulu, olunzima lweshishini olunikezela ngakumbi nangakumbi kwaye luvumela ukufakwa kobukhulu bephepha. Ilungele loo maxwebhu makhulu, anama-bulkier.
Itywina elihle leShishini- $ 96
Idiski ebunjiweyo yedesika ebunjiweyo yentsimbi yenza udibaniso olukhulu kulo naliphi na iqumrhu okanye iofisi yeshishini. Ezi zinto zenziwe ngedesktop zibunjiweyo zentsimbi, emva koko zaphoswa ngesandla ukwenza umphezulu ogudileyo. Zifumaneka nge-epoxy egqityiweyo, i-24K yegolide egqityiweyo okanye i-chrome.